allsanaag.com - Fadeexad kale safaarad kale oo la kiraystay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3206	Days	08	Hours	20	Minutes	36	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Fadeexad kale safaarad kale oo la kiraystay
Written by khalid	Fadeexad cusub: Danjiraha awooda badan oo iibiyay Safaaradii 3-aad.
Aabaha xaraashka Safaaradaha Soomaaliya Nuur Cade oo saami ku leh safaarad kasta oo la kireeyo ama la gado
Waxaa soo baxaya faahfaahin muujinaysa in dhismo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee dalka Tanzania laga kireeyay Ganacsade Shiines ah sidoo kalena waxaa la soo sheegaya in sheekada ay ka weyn tahay kiro balse Shiineska si rasmi ah ula wareegan dhismahaas.
Dhismihii Safaaradda Soomaaliya ee Tanzania oo loo bedelay Maqaayad Ganacsato Shiines ay leeyihiin lagana iibiyay, C/xakiin Ugaas iyo Nuur Cadde Ma is og yihiin Mise waxay kala socdaan
Guriga la kireeyay Safarada Tanzania lagana kireeyay Ganacsato Shiines ah, Waxaa ku dhegan calanka Shiinaha si fiican u daawo Sawirka
Newsomali.com waxay heshay Sawiro laga soo qaaday dhismaha safaaradda oo hadda loo bedelay goob ganacsi ah ama maqaayad lagu iibiyo qabriga.
Soomaaliya waxay ku lahayd dalka Tanzania 3 dhismo waa weyn mid waxaa iibsaday toban sano ka hor ninka hadda lagu aaminay Safaaradda Soomaaliya ee Zambia Mohamed Hassan Dawaare, midna hadda waxaa fadhiya oo xarun u tahay Safiirka Soomaaliya ee tanzania midii 3 aadna Safiirka Soomaaliya ee Tanzania C/xakiin Ugaas ayaa lagu eedeeyay inuu ka iibsaday ganacsade Shiines ah.Safiirka Soomaaliya ee Tanzania C/xakiin Ugaas oo dhawaanahan la joogay qoyskiisa degan Sweden marna ma uusan qarsan in dhismahaas u gacan geliyay ganacsato Shiines ah.
Ninkan Ilka cadaynayaa , waa Nuur Cade kale waa i Ninkii Gurigii hore ee Safaaradda Tanzania gatay oo hadda safiir ka ah Sambia Mohamed Hassan Dawaare
Ninka halkan taagan Waa Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania C/xakiin Ugaas isaga ayaana kireeyay guriga
Ninkan Safiirka ah oo horey looga eedeyn jiray inuu ka macaasho iibsiga maxaabiista Soomaalida ee ku xiran xabsiyada Tanzania sidoo kalena markii uu safiirka ka ahaa dalka Liibiya lagu eedeyn jiray inuu xiriir kala dhaxeeyay kooxaha dadka soo tahriibiya ee ka shaqeeya Liibiya iyo inta u dhaxeysa Talyaaniga kuma cusba eedeymaha ah in uu wax is daba mariyo.Guriga la kireeyay Safarada Tanzania
Dowladda Soomaaliya ee Madaxweynaha ka yahay Xasan Sh Maxamud indhaha ayay ku haysaa waxyaabaha dhacaya laakiin laga yaqaano tallaabada ay ka qaadayso nimankan diblomaasiyiinta ah ee ku cad cad iibsiga hantida qaranka.
Waxaa ka mid ah dadka hadda farta lagu fiiqayo Safiirka soomaaliya ee Talyaaniga Danjire Nuur Cadde oo cadaadis culus saaran yahay kaas oo mid ka mid ah Dhismayaasha Safaaradda Soomaaliya ee Roma u gacan geliyay Shirkad Talyaaniga oo haysan doonto Dhismahaas muddo 18 sano hadii loo baahdo intaas ka badan guriga gacanta ugu jiri karo Shirkadaas.
Laakiin Wariyaha BBC da Laanta Soomaalida Aadan Sabriye oo shalay wareysi siiyay Idaacadda BBC da waxaa uu leeyahay guriga waxaa uu u baahan yahay oo kaliya dayactir balse warka sheegaya inuu gurigaas dumi rabo ay tahay been laga badiyay.
Waxaa kaloo Aadan Zabriye leeyahay Baarlamaanka Soomaaliya ayay u taala inay laadan heshiiskaas isla markaana dib u eegan warka Nuur cadde ka soo yeeray.
Wasiirada Arrimaha dibadda Soomaaliya Fowziyo Yuusuf Xaaji oo madax u ah Guddi wasiiro oo loo xilsaaray arrinta Safaaradda ayaa hadda u muuqata mid qiyaamaynayso wixii ay u dhaaratay ee ahaa in ay daacad ugu adeegayso qaranka Soomaaliyed.
Ra’iisal Wasaare Saacid ilaa iyo hadda kama uusan hadlin dhacdooyinkan is xigxiga ee ka soo baxaya diblomaasiyiinta Soomaaliya ee dibadda.
Laakiin waxaa jira warar sheegaya in haddii la wajihi lahaa raggan la eedeynayo laga baqayo in loo arko arrimo gaar ah lagu weerarayo beelo gaar ah waa sida hadalka loo dhigay.
Dhismihii Safaaradda Soomaaliya ee Tanzania oo laga kireeyay Ganacsato Shiines ah,Maxaa laga furay hadda, Mise og tahay in 1992 dii Gurigii koowaad la iibsaday, Ninkii iibsaday Hadda dal kale ayuu Safiir ka yahay, Warbixin
Sidaas darteed Ra’iisal Wasaare Saacid waxaa uu qorsheynaya inuu is bedel ku sameeyo safaaradaha dibadda waxaana la soo koobi doona safaaradaha tirada badan ee tayada liita, waxaana laga dhigi doona ilaa 20 Safaaradood.
Qorshaha socda waxaa waaye in la isku daro Safaaradaha dalalka isku dhaw dhaw, qorshahaas hadda waxaa uu socdaa laakiin lama meel marin.
Sidoo kale Guddiga Golaha Wasiirada u xilsaaran inay soo baaran dhacooyinka ka dhacay Roma iyo Tanzania ayaa durba waxaa la leeyahay waa la laalushay qaarkood waxayna bilaabeen inay difaacan Safiirada Roma iyo Tanzania.
Ninkii Gurigii hore ee Safaaradda Tanzania gatay oo hadda safiir ka ah Sambia Mohamed Hassan Dawaare ilaa iyo hadda kama uusan hadlin sababta ku kaliftay markii uu joogay Tanzania inuu iibiyo guriga 3 aad
New somali < Prev